DEG DEG: Qarax khasaare xooggan geystay oo caawa ka dhacay Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG: Qarax khasaare xooggan geystay oo caawa ka dhacay Muqdisho
DEG DEG: Qarax khasaare xooggan geystay oo caawa ka dhacay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Qarax xooggan oo Khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa caawa ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka Garoonka Aadan Cadde.
Warar ay helayso Halqaran News, ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ahaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay maqaayad ku taalla meel aan sidaasi uga fogeyn Garoonka diyaaradaha.
Qaraxan ayaa la sheegay inuu fuliyay qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kadibna isku qarxiyay maqaayad lagu magacaabo Jalaato Devino oo ku taalla waddada laga galo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in qofka is qarxiyay uu gudaha u galay maqaayadda, halkaasina uu ku waxyeeleeyay dadkii ku sugnaa.
Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee uu qaraxaasi geystay, balse waxaa la sheegay inay dad badani ay ku dhinteen qaraxaasi.
Wixii faah-faahin ah ee ku soo kordha kala soco Halqaran.com.
maqaayadda Jalaato Devin